Ibhayisikili Lomoya Wentengiso, Umqeqeshi Wesiphambano Elliptical, Ibhayisikili Lokuzivocavoca- iBestgym
Amabhayisikili wokuzivocavoca asetshenziselwa ukuzivocavoca umzimba, ukukhulisa ukuqina okuvamile, ukunciphisa umzimba, nokuqeqesha imicimbi yomjikelezo. Ibhayisikili lokuzivocavoca kade lisetshenziselwa ukwelashwa ngokomzimba ngenxa yomthelela ophansi, ophephile, futhi osebenzayo wokuzivocavoca kwenhliziyo okunikezayo.
Umshini oyindilinga usebenzisa isimiso sokuthi lapho umzimba womuntu uhamba kancane, ngesivinini, noma ngokugijima, ithrekhi yokunyakaza kweqakala iyafana ne-ellipse. Ngokusebenzisa inqubo ethile, iphedali ihamba kumzila we-elliptical, futhi ithrekhi ye-elliptical eyenziwe yi-pedal iqondisa izinyawo zomsebenzisi Ukusetshenziswa komshini we-elliptical kwenza isenzo sokuqina somshini we-elliptical sihambisane nesinyathelo semvelo somuntu. Ngesikhathi sonke sokuzivocavoca umzimba, unyawo alushiyi ngokuphelele ukuphehla, okunomthelela omkhulu ekuhlanganeni kwamadolo, futhi kungavivinya imisipha yezitho zomzimba ezingaphezulu nezingezansi ngasikhathi sinye. , Kuthathwa njengokuthuthuka kwemishini yokuzivocavoca nge-aerobic eminyakeni yamuva.
I-bai yebhayisikili kazibuthe ikakhulukazi isetshenziselwa ukuhlinzeka abantu ngethuluzi lokuhamba ngokushesha elingu-1653 elingavinjelwe isisindo sokumelana nesisindo somzimba, line-coefficient ephansi yokungqubuzana engu-4102, ilula futhi iphephile, futhi ayinakho ukungcola kwamandla namandla. Kubandakanya ukuhlangana kwebhayisikili nendlela yokushayela. Uma ushayela, abantu badinga kuphela ukuhambisa izinyawo ezingakwesobunxele nangakwesokudla phambili. Umnyombo kazibuthe oyinhloko ku-flywheel ushayela umnyombo kazibuthe wesibili ukuzungeza ngamandla kazibuthe. Lapho ama-pedal angakwesobunxele nangakwesokudla eshenxiswa ngokushesha, amiswa kuzibuthe wesibili Isondo langemuva enkabeni lijikeleza ngejubane elikhulu. Lapho iphedali lima, ngaphansi kwamandla kazibuthe, ibhayisikili lingahamba ibanga elide ngokuzenzekelayo.
Steel Uzimele Isihlalo Recumbent Ukuzivocavoca Hamba BGR103
China Factory Inani ukuqina recumbent e e ...
Ifolda Yokwenza Imishini Yokuzivocavoca Yasekhaya Egoqekayo
Ukuthengiswa okushisayo kwentengo enhle yokuqina komzimba kuhleliwe R ...
Ozakwethu kulo lonke
Okthoba 30, 2020